काठमाडौं। धेरैको चाहना हुन्छ, स्थायी जागिर खाने। त्यसका लागि आफ्नो पढाइलाई नै विश्राम दिएर लोक सेवा तयारी गर्न थाल्छन्। स्थायी जागिर खाइसकेपछि आफ्नो इच्छा, चाहना तथा सपनासमेत पूरा भएको ठान्छन्।
तर कतिपय यस्ता पनि हुन्छन्, आफ्नो चाहना तथा उद्देश्य एक हुन्छ काम भने अर्को गरिरहेका हुन्छन्। उनी अन्ततः आफ्नै चाहना तथा उद्देश्य पूरा गर्नतिर लाग्छन्।
हो, पछिल्लो समय गायन क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गायक नवराज कलौनी पनि यस्तै मध्येका एक हुन्। सानैदेखिको रूचि तथा चाहना गायन क्षेत्रमा लाग्‍ने। उनको मन मस्तिष्कमा पनि कलाकार बन्‍ने नै थियो। तर उनी आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि स्थायी जागिरे बने।
“मेरो रूचि र चाहना गायन नै थियो। तर, बाध्यताले जागिर खान पुगेँ। अरू सबैजना जागिरका लागि मरिहत्ते गर्छन्। मैले भने आफ्नो रूचिका लागि जागिरबाट राजीनामा दिएँ।”
दुई वर्ष स्थायी सेवा गरे। तर उनको मनमा भने स्थिरता थिएन। हुन पनि कसरी होस्, उनको मन मस्तिष्क नै गायन क्षेत्रमा थियो। आफ्नो चाहनाका लागि उनले अन्तत: जागिर नै त्यागिदिए।
“मेरो रूचि र चाहना गायन नै थियो। तर, बाध्यताले जागिर खान पुगेँ। अरू सबैजना जागिरका लागि मरिहत्ते गर्छन्। मैले भने आफ्नो रूचिका लागि जागिरबाट राजीनामा दिएँ,” गायक कलौनीले देखापढीसँगको कुराकानीमा भने।
उनी २०७० सालमा जागिरबाट राजीनामा दिएर काठमाडौं आए। अपाङ्‍गता पुनर्स्थापना केन्द्रको कैलाली तथा डडेल्धुरा हेर्ने उनको जिम्मा थियो। त्यसपछि उनको सल्यान सरूवा भयो। उनी सल्यान नआई राजीनामा दिएर सिधै काठमाडौं आए।
“काठमाडौं आएर मैले आफ्नो पढाइलाई पनि अगाडि बढाएँ। सँगसँगै संगीत कक्षा लिएँ। सल्यान गएको भए गायन क्षेत्रमा लाग्‍ने मेरो सपना पूरा हुने थिएन। यसैले मैले राजीनामा नै दिएर काठमाडौं आएँ,” गायक कलौनीले भने।
अहिलेसम्म उनले दुई दर्जनभन्दा बढी गीत गाइसकेका छन्। केही गीत उनले आफैंले रचना गरेका हुन्। उनका थुप्रै गीतले चर्चा पाएका छन्।
यतिबेला उनकै शब्द, संगीत तथा स्वरमा रहेको ‘चर्चा चल्दिरा’ गीत सार्वजनिक भएको छ। एलिना चौहान र उनको स्वरमा रहेको यो गीतको प्रतिक्रिया पनि राम्रो आइरहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि उनले भोजराज भट्टको धेरै पुरानो गीत ‘जौ पात’ लाई रिमेक गरेका थिए।
उनी सानैदेखि स्टेज कार्यक्रममा गाउँथे। विद्यालयमा हुने कार्यक्रममा पनि गीत गाउँथे। तर, औपचारिक रूपमा भने उनी २०७४ सालबाट गायन क्षेत्रमा अगाडि बढे।
उनको शब्द संगीत रहेको ‘बेहुलो सिपाही छ’ बोलको गीत निकै चर्चामा आयो। त्यही गीतले उनलाई राम्रैसँग चिनायो।
केही वर्ष पहिलासम्म सुदूरपश्चिमतिरका गीत धेरैको रोजाइमा थिएन। तर, पछिल्लो समय भने हरेकको रूचिमा छ।
“सुदूरपश्चिमतिरको गीत संगीत केही वर्ष अगाडिसम्म एउटै लयमा अगाडि बढिरहेको थियो। तर, दर्शक स्रोताले केही नयाँपन मागिरहेका थिए। जुन दिन सकिरहेका थिएनौं। पछिल्ला केही वर्षमा हाम्रो गीतले फ्यूजन ल्याएको छ। नयाँ प्रकारको स्वाद दिइरहेको छ,” उनले भने।
लगानी कसरी जुटाउने ?
अहिलेको समयमा गीतहरूको लागत महँगो परिरहेको छ। एउटै गीतको म्युजिक भिडियो तयार पार्दासम्म झण्डै तीन लाख रुपैयाँ खर्च लाग्‍ने उनको भनाइ छ।
त्यत्रो लगानी आफ्नै हुन्छ कि कताबाट जुटाउने? गायक कलौनी भन्छन्, “मैले आफ्ना अधिकांश गीतहरूका लागि आफैंले लगानी जुटाइरहेको छु। साथीभाइ, घरपरिवार तथा इष्टमित्रबाट नै आर्थिक स्रोतलाई जुटाइरहेको छु।”
त्यत्रो खर्च गरेर किन भिडियो बनाउने ?
गीतको लगानी गरेअनुसारको आम्दानी हुँदैन। केही दुई चार वटा गीतबाहेक अन्य गीतले लगानीसमेत उठाउने अवस्था छैन। यदि त्यसो हो भने किन त्यत्रो लाखौं खर्च गर्ने?
जवाफमा नवराज भन्छन्, “यसैलाई भनिन्छ, संगीतप्रतिको लगाव। काम गर्दै जाँदा भोलि गएर राम्रो होला भन्‍ने आशा हुन्छ। गीत चल्यो भने एकातिर युट्युबबाट पनि कमाउन सकिन्छ। अर्कोतिर स्टेज कार्यक्रमबाट पनि राम्रै स्थान पाउन सकिन्छ भन्‍ने आशा हुन्छ।”
यो क्षेत्रमा जोखिम धेरै उनको उनको भनाइ छ। “त्यही जोखिमका कारण यहाँ सबै टिक्दैनन्। कैयौं यस्ता कलाकार पनि छन्, जाे लामो समयदेखि आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनीहरूले गीत संगीतलाई नै पेसा बनाएर अघि बढेका छन्। यो क्षेत्रबाट टाढा पनि जान सकिँदैन,” उनले भने।
यो क्षेत्रमा लाग्दा कस्तो खालको समस्या हुन्छन्?
गीत संगीत क्षेत्रमा लागेको उनलाई धेरै वर्ष भने भएको छैन। तर, उनले यो क्षेत्रमा सम्पूर्ण समस्यासँग परिचित भइसकेका छन्। त्यसमा उनले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै आर्थिक पाटो हो।
“गीत आफैंले सिर्जना गर्ने, आफैंले गाउने गर्दा अन्य समस्या त छैनन्। आर्थिक पाटोमा भने समस्या हुँदोरहेछ,” उनले भने, “अचेल म्युजिक भिडियो निकै महँगो हुन थालेकाे छ। यस्तो अवस्थामा सबैसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।”
संगीत क्षेत्रमा लागेपछि पछुताएको अवस्था छ?
गीत संगीतमा लागेपछि त्यसका प्रतिफल पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले केही समय काम गरेर पछि पछुताउँदै पलायन पनि हुने गरेका छन्। के गायक कलौनीलाई कहिले यस्तो भएको छ?
उनले जवाफमा भने, “कुनै-कुनै बेला यस्तो पनि हुँदोरहेछ। त्रिविबाट मास्टर्स गरें। गीत संगीत क्षेत्रमा लाग्छु भन्‍ने मेरो सानैदेखिको लक्ष्य थियो। त्यसका लागि जे पनि गर्न तयार थिएँ। कुनै-कुनै बेला आफूलाई पछुतो पनि लाग्यो। यो क्षेत्रमा लाग्‍नुभन्दा त जागिर नै खाएको भए हुन्थ्यो भन्‍ने लागेको थियो। तर आफ्नो मनले मान्दोरहेनछ।”
आफूसँग भएका सिर्जनाले नै आफूलाई सन्तुष्ट बनाउने उनको भनाइ छ। “सिर्जना भनेको कल्पना रहेछ। आफ्नो वरपर भइरहेका कुराहरूलाई नै सिर्जना बनाएर गीतको रूपमा बनाउँछु,” उनले भने।
बैतडी तल्लोसोराड पुर्ख्याैली घर भएका उनको जन्म भने डडेल्धुराको देबल दिव्यपुरमा भयो। नाै महिनाको हुँदा नै उनी महेन्द्रनगर आए। अहिले बेतकोट नगरपालिका भाषीमा बस्दै आएका उनी क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने योजनामा छन्।
उनका अहिलेसम्मका सिर्जनाहरूमा बेहुलो सिपाही छ, बनारसको साडी, बारिको पाटामा, मुना, माकुरीलगायत रहेका छन्।
(*यसअघि 'स्थायी जागिर' हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे छ। सं.)
प्रकाशित: शनिबार, माघ १०, २०७७ ०७:४५
कञ्चनपुर घर भएका नवराज कलौनी पछिल्लो समय उदाउँदो गायकका रूपमा परिचय बनाउँदै आएका छन्।
गायन क्षेत्रमा लाग्‍नकै लागि उनी स्थायी जागिरबाट राजीनामा दिएका थिए।
पछिल्लो समय उनको शब्द संगीत तथा स्वरमा रहेको 'चर्चा चल्दिरा' गीत सार्वजनिक भएको छ।